VIVA + DTH ၀ န်ဆောင်မှုက Thomson ဗွီဒီယိုကွန်ယက်များ၏ ViBE VS7000 Multi-Screen System ကို ရွေးချယ်၍ FIFA World Cup 2014 ကိုအင်ဒိုနီးရှားပရိသတ်များသို့လွှဲပြောင်းရန် | NAB သတင်းများ | 2020 NAB Show Media Partner နှင့် NAB Show LIVE ၏ထုတ်လုပ်သူ။ အသံလွှင့်အင်ဂျင်နီယာသတင်း
ပင်မစာမျက်နှာ » သတင်း » Viva + အင်ဒိုနီးရှားပရိသတ်များမှဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား 7000 ထုတ်လွှတ်ပါရန် DTH Service ကိုရွေးချယ်သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' Vibe VS2014 Multi-Screen ကိုစနစ်
Viva + အင်ဒိုနီးရှားပရိသတ်များမှဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား 7000 ထုတ်လွှတ်ပါရန် DTH Service ကိုရွေးချယ်သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' Vibe VS2014 Multi-Screen ကိုစနစ်
RENNES, ပြင်သစ် - မေလ 29, 2014 - သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ကယနေ့အသစ်အင်ဒိုနီးရှားတိုက်ရိုက်-to-နေအိမ် (DTH) ထုတ်ပြန်ကြေညာ ဂြိုဟ်တု ဝန်ဆောင်မှု Viva + အင်ဒိုနီးရှားတွင်ကြည့်ရှု-TV ကိုဆပ်ဖို့ဒီနွေရာသီရဲ့ဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား 7000 ဆောင်ကြဉ်းနိုင်ရန်အတွက်တစ်ဦး Vibe (TM) VS2014 Multi-screen ကိုဗွီဒီယိုကို system install လုပ်ခြင်းသိရသည်။ တစ်ဦးကကမ္ဘာ့ဖလား 2014 ထုတ်လွှင့်လိုင်စင်ရ, Viva + ဧပြီလအတွက်၎င်း၏ပထမဆုံးထုတ်ကုန်, Ultimate ကမ္ဘာ့ဖလားတီဗီစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားရှိဘောလုံးပရိတ်သတ်များဖြစ်လိမ့်မည်နှစ်ခုဖြစ်သောကိုး Ultimate ကမ္ဘာ့ဖလားလိုင်းများပေါ်တွင်အဖြစ်အပျက်အားလုံးကို 64 အဓိကဂိမ်းများ, ပျော်မွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည် HD အရည်အသွေး။ အဆိုပါ Vibe VS7000 အပိုကြော်ငြာဝင်ငွေကို generate မှကြော်ငြာထည့်သွင်းရန်အတွက်အဖြေတစ်ခုနှင့်အတူတစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ DTH နှင့် Viva + s ကိုလစာ-TV ကိုလျှောက်လွှာများအတွက် over-the-ထိပ်ဆုံး (OTT) ပလက်ဖောင်းအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့နှင့်ညှိနှိုင်းကာသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယို Networks ကဒီဇိုင်းရေးဆွဲအဆိုပါဗိသုကာစင်ကြယ်သောအိုင်ပီစနစ်အဘို့ငါတို့မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အတူပြီးပြည့်စုံပွဲစဉ်ဖြစ်ပါတယ်" ဟုဒါဝိဒျသ Khim, Viva + ၏ CEO ဖြစ်သူကပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သောအသံကျယ်လောင်ထိန်းချုပ်မှုအဖြစ်အဆင့်မြင့် features တွေကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအနေဖြင့် "multiplexing အဘို့နှင့်ရှာဖွေနေကြော်ငြာသွင်းများအတွက် Vibe VS7000 ချုံ့ဘို့, Sapphire, နှင့် NetProcessor နှင့်အတူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့တစ်ခုလုံးကိုလုပ်ငန်းအသွားအလာအပြည့်အဝအိုင်ပီ-based ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ convergence system ကို OTT များအတွက်လစာ TV နဲ့ ABR များအတွက် VBR အတွက်တစ်ပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုင်းများ encodes ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထို့အပြင်သွန်မ်ဆင်ပလက်ဖောင်းသိသိသာသာကျွန်တော်တို့ရဲ့စစ်ဆင်ရေးရိုးရှင်းစွာ။ "
အဆိုပါ Vibe VS7000 system ကို Viva + ချုံ့နှင့်တန်ဖိုး-added ထိုကဲ့သို့သောအသံကျယ်လောင်ထိန်းချုပ်ရေးအဖြစ်အင်္ဂါရပ်များ, စာတန်းထိုးမီးလောင်-၌၎င်း, တွားစာသားအဆင့်မြင့်စွမ်းဆောင်ရည်များနှင့်အတူလုံးဝပေါင်းစပ်အိုင်ပီ / ထွက်အတွက်ပလက်ဖောင်းပေးသည်။ စနစ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်, Viva + ဟာ Vibe CP6000 အလှူငွေပလက်ဖောင်းတစ် Sapphire ရုပ်သံလိုင်း-in-a-box ကို MPEG ထုတ်လွှင့်ဆာဗာနှင့်တစ်ဦး NetProcessor 9030 multiplexing နှင့်ဗီဒီယို Processor ကိုအပါအဝင်အခြားသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ဗွီဒီယိုချုံ့ဖြေရှင်းနည်းများ, တစ်ဦးအဖြည့် installed ။
အဆိုပါ Vibe VS7000 ဗီဒီယိုက system ကို Viva + ကအတူတက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်အခြေခံအုတ်မြစ်ပေးခြင်း, တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှထုတ်လွှင့်အရည်အသွေး encoding က, ဆန်းသစ်သောဗီဒီယို preprocessing နှင့်ပိုမြန်-ထက်-Real-time ဖိုင် transcoding နှင့်အတူထူးချွန်ရုပ်ပုံအရည်အသွေးသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' ကျော်ကြားတဲ့ချုံ့နည်းပညာပေါင်းစပ် ကမ္ဘာ့ဖလား၏အစာရှောင်ခြင်း-ပွေးညီသဘာဝ။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, Viva + ကြော်ငြာဝင်ငွေအဘို့အခွင့်အလမ်းသစ်များဖွင့်ဖွင့်လှစ်လိမ့်မည်ဟုဒစ်ဂျစ်တယ်အစီအစဉ်ကိုထည့်သွင်းရန်အတွက်တစ်သက်သေ turnkey ဖြေရှင်းချက်ရှိပါတယ်။
"ကိုယ့်ဧပြီလထဲမှာစတင်သော်လည်း Viva + နှင့်ယင်း၏ Ultimate ကမ္ဘာ့ဖလားလိုင်းများပြီးသားအင်ဒိုနီးရှားဘောလုံးပရိသတ်တွေအဘို့အကြောင်းအရာအရေးပါသောအရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါပစ်လွှတ်ပြင်ဆင်နေသည့်စံပြဖြေရှင်းချက်ကိုဖန်တီးရန်အခမဲ့ငါတို့အားလုံးကိုကျန်ရစ်သည့်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Greenfield DTH စီမံကိန်းကိုပဲ "ဟုတိုနီ Berthaud, သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်များအတွက်ရောင်းချမှုနှင့်ဝန်ဆောင်မှုများ၏အာရှပစိဖိတ်ဒါရိုက်တာဖြစ်သူကဆိုသည်။ "ဒါကအချိန်ဇယားကိုအဓိကအချက်တစ်ချက်ဖြစ်ခဲ့သည်များနှင့်နှစ်ဦးစလုံး Viva + နှင့်သွန်မ်ဆင်အသင်းများကိုစံချိန်တင်အချိန်အတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပလက်ဖောင်းကယ်နှုတ်တော်မူဖို့ရန်အလွန်နီးကပ်ပူးပေါင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့ကပြောသည်။ ကျနော်တို့အင်ဒိုနီးရှားရှိ Viva + န်ဆောင်မှုများအဘို့ကြီးစွာသောအနာဂတ်မြော်နှင့်ကြှနျုပျတို့သညျဤအသစ်ကအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ဝမ်းသာပီတိနေကြတယ်။ "
အဆိုပါ Vibe VS7000 နှင့်အခြားသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်ထုတ်ကုန်အကြောင်းကိုနောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်များမှာရရှိနိုင် www.thomson-networks.com.
PT ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအာရှနှင့် Viva + အကြောင်း
PT ဒစ်ဂျစ်တယ်မီဒီယာအာရှ PT Visi မီဒီယာအာရှ Tbk ၏လက်အောက်ခံဖြစ်ပါတယ်။ (Viva), အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏မီဒီယာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လူသိများတဲ့ကစားသမား။ ၎င်း၏အမြင်နှင့်မစ်ရှင်က၎င်း၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်အဖြစ် Viva + ဖြင့်အင်ဒိုနီးရှားအတွက်ဦးဆောင် convergence တိုက်ရိုက်-to-အိမ်မှာ prepaid တီဗီဝန်ဆောင်မှုအော်ပရေတာဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ Viva + ဟာဖီဖာကမ္ဘာ့ဖလား 2014 ထုတ်လွှင့်လိုင်စင်နှင့်ဧပြီလ 2014 အတွက်၎င်း၏ပထမဆုံးထုတ်ကုန်, Ultimate ကမ္ဘာ့ဖလားတီဗီဖွင့်လှစ်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားရှိဘောလုံးပရိတ်သတ်များအတွက်သူတို့ကိုနှစ်ခုနှင့်အတူကိုး Ultimate ကမ္ဘာ့ဖလားလိုင်းများပေါ်တွင်အဖြစ်အပျက်အားလုံးကို 64 အဓိကဂိမ်းကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည် HD အရည်အသွေး။
အဆင့်မြင့်ဗွီဒီယိုချုံ့ဖြေရှင်းချက်ထဲမှာတစ်ဦးကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက်, မီဒီယာများကုမ္ပဏီများမှကူညီပေးသည်ဗီဒီယိုကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနှင့်ထုတ်လွှင့်အလှူငွေတို့အတွက်နိမ့်ဆုံး-ဖြစ်နိုင်သော bandwidth ကိုမှာသာလွန်ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးအပ်ကုန်း ဂြိုဟ်တု, cable IPTVနှင့် OTT န်ဆောင်မှု။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုမှသွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် '' ဖြစ်ပွားနေသောကတိကဝတ်မှတဆင့်ဖောက်သည်ဗွီဒီယိုအသစ်န်ဆောင်မှုများ၏ထိရောက်ပေးပို့ဘို့, ထိုကဲ့သို့သောသစ်ကို HEVC ချုံ့စံအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာနည်းပညာများ, မူတည်ပြီးနိုင်ကြသည်။ ဤသည်ကြီးမားသောတီဗီဖန်သားပြင်မှသေးငယ်တဲ့လက်ကိုင် device များအနေဖြင့်တိုင်းပလက်ဖောင်းထောက်ပံ့ Multi-screen ကို applications များပါဝင်သည်။ ခရီးစဉ်: အဖြစ်နိုင်သောမြင်ယောင် www.thomson-networks.com.
ဓာတ်ပုံစာတန်းထိုး: Vibe (TM) VS7000 Multi-Screen ကို & HEVC ကုဒ်မြှပ်သွင်းကိရိယာ
ဓာတ်ပုံ Link ကို: www.wallstcom.com/ThomsonVN/ThomsonVN-ViBE_VS7000.jpg
အသံလွှင်း အကြောင်းအရာ DTH ဖီဖာ OTT သွန်မ်ဆင်ဗီဒီယိုကွန်ယက် Vibe BS7000 Viva + ကမ္ဘာ့ဖလား 2014-05-30
ယခင်: အဆိုပါ 2014 ကို Creative သိုလှောင်ညီလာခံ (SM) မှာမီဒီယာ Workflows များအတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်သိုလှောင်
နောက်တစ်ခု: ထုတ်လွှင့် Pix Vox Lite ကို Voice ကို-အလိုအလျောက်ထိန်းချုပ်ရေးမိတ်ဆက်